ဘုံဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်အမှား - Parfit အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ (Jiangsu) Co. , Ltd မှ
ဘုံဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်အမှားï¼
ဟိုက်ဒရောလစ်ကွေးစက်စာရွက်သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသုံးအများဆုံးယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြောက်အမြားအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်မှုသုံးစက်ကိရိယာများကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုအပြီးပြဿနာများ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်နည်း
1. အဆိုပါ damping အပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားလျှင်, system မပါအဓိကဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦးကျိုးသည်ကိုမလျော်ကန်သောညှိနှိုင်းမှုသည်, အဆို့ရှင်ကန်တော့ချွန်ကောင်းစွာတံဆိပ်ခတ်သည်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အဆို့ရှင် core ကိုမှီဝဲသည်။ စင်ကြယ်သောကြိတ်, ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်, adjust အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့သို့မဟုတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။ အဆို့ရှင်နောက်ပြန်ဆုတ်အဆိုပါလျှပ်စစ်သံလိုက်ပျက်ယွင်းနေပြီးအဆို့ရှင် core ကိုဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သော, ထိုဆလိုက်ဆို့ရှင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်သို့မဟုတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။
2, ပု slider ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒါပေမယ့် axial ပစ္စတင်စုပ်စက်ချ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်ဖိအားရေနံထောက်ပံ့မပေးနိုငျသညျ fritters ဆီတိုတောင်းပါ၏ အဆိုပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု button ကိုစတင်ရန်, ထိုမော်တာစတင်ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ AC အ contactors နှင့်အပူ relays များနှင့်မော်တာ; သူ့ဟာသူပျက်ကွက်သည့် plunger စုပ်စက်, disassembles ဒါမှမဟုတ် plunger စုပ်စက်ကိုအစားထိုး။
3. အဓိကရေနံလိုင်းလျတ်အဆို့ရှင်ပျက်ယွင်းနေသည်။ ဒါဟာ damping ပေါက်နွေဦးကျိုးသည်သို့မဟုတ်အဆို့ရှင် core ကို rusted နှင့်ဖမ်း, လျြောပိတ်ဆို့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်, adjust သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်အစားထိုးလိုအပ်ပါတယ်။
4. slider ကို Parallel နှင့် deflate ဖို့ငွေကြေးကျုံ့အဆို့ရှင် handwheel တင်းကြပ်နှင့်လေကြောင်းချိန်ခွင်လျှာဆလင်ဒါထဲမှာရှိမပေးပါ။ ရေနံဖြည့်ခြင်းနှင့်လေထုကိုဖယ်ရှား, ထို့နောက်အဆို့ရှင်လျှော့ပေးရေး။
5. သွေးထွက်အဆို့ရှင်တစ်ဦးယိုစိမ့်ရှိပြီး, အပိတ်ဆို့အဆို့ရှင်၏တံဆိပ်ခတ်ဖယ်ရှားသည်နှင့်သွေးထွက်အဆို့ရှင်ပြင်၏သို့မဟုတ်အစားထိုးနေသည်။
6. အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်ပြည်တွင်းရေးယိုစိမ့်ရှိပါတယ်, နှင့်စစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်များ၏စစ်ဆေးမှုများမျက်နှာပြင်၏တံဆိပ်ခတ်ဖယ်ရှားသည်။ အဆိုပါကြိတ်ကန်တော့ချွန်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်လိုင်းအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်အဆို့ရှင်အစားထိုးသည်တလမ်းအတွက်ပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြည်းကြိုးကိုဖြည် 7. Bende စက်ချိန်ခွင်လျှာဆလင်ဒါပစ္စတင်လှံတံခေါင်းကို Oblique သံစွဲစေဝက်အူ, ထိုပစ္စတင်လှံတံခေါင်းကို Oblique သံခိုင်မာတဲ့ဝက်အူစစ်ဆေးနှင့်ခိုင်ခံ့စေ။